Ndingenza ntoni ukuba ndicinga ukuba ndine-COVID 19? – 750 AMPED
Home » Ndingenza ntoni ukuba ndicinga ukuba ndine-COVID 19?
Zithini iikhrayitheriya ze-COVID-19 zokukuvavanywa kubantu abangageniswanga esibhedlela?
Ezikhrayitheriya zihlaziywa rhoqo National Institute for Communicable Diseases (i-NICD). Jonga inkcazo yemeko yomntu ophantsi kophando (PUI).
Uya kuvavanywa kuphela ukuba uyahlangabezana nekhrayitheriya ye-PUI, okubandakanya ukuba neempawu zesifo sokuphefumla esiqalisa kutsha nje okanye ngesiquphe.
Kutheni ndingafanele kuvavanyelwa isifo se-coronavirus ukuba ndinexhala kodwa ndingenazo iimpawu?
Kukho inani lezizathu zokuba kutheni singancomi ukuvavanywa komntu ongenazo iimpawu, nokuba udibene ngokusondela kumntu okuqinisekisiweyo ukuba ne-COVID-19 okanye kutsha nje uye kwilizwe apho i-COVID-19 ijikeleza uluntu:
Iziphumo zovavanyo ezithi umtu akanayo i-COVID19 kumntu ongenazo iimpawu azithethi ukuba awunayo i-COVID-19. Usenokuba kumqanaba yokuqala we-COVID-19 kwaye ukhule iimpawu kamva. Ke ngoko, ukuvavanya xa ungenazimpawu inokunika isiphumo esingeyonyani.
Nokuba iziphumo zakho zovavanyo lwelabhoratri zithe ukuba awunayo i-COVID-19, kusafuneka ukuba uhlale ekhaya uvalelwe wedwa kangangeentsuku ezili-14 ukuba ukhe waya kwingingqi elinosulelo oluphezulu okanye wadibana ngokusondela nomntu oqinisekisiweyo ukuba ne-COVID-19 . Jonga isikhokelo se ndingenza ntoni ukuba ndidibane ngokusondela kumntu esiqinisekisiweyo ukuba nesifo kwaye ndicelwe ukuba ndiye kuvalelo ekhaya.
Ukuba uvavanywe ukuba awunayo i-COVID-19 kwaye ngempazamo ukutolika oku kuthetha ukuba awuzange usulelwe, unokubuyela kwimisebenzi yakho yesiqhel okwaye usasaze intsholongwane ngelixa usenosulelo olutsha.
Kukho ukunqongophala kovavanyo lwelebhu kwihlabathi jikelele, kwaye kufuneka sigcine izixhobo zethu ezixabisekileyo zovavanyo zaselabhoratri sizo nika abo bagulayo namaqela abantu apho singasebenzisa ezi ziphumo zovavanyo kwimpilo yoluntu.
Inkqubo yovavanyo ngqo inoku hluka kumaphondo ahlukeneyo naphakathi kwamacandelo oluntu nawabucala. Ngokubanzi, kuya kufuneka kuqala uqhagamshelane nomnikezeli wakho wezempilo. iklinikhi okanye isibhedlele sasebuhlaleni. Oku kusenokuba nguqira wakho okanye ikliniki okanye isibhedlele sakho. Kufuneka uqale ufonile ukuba uyakwazi, ufumanise ukuba yeyiphi eyona nkqubo yokuba uvavanywe. Ukuba awukwazi ukumfumana umnikezeli wakho wempilo, ungazama ukutsalela umnxeba kwilabhoratri yakho yokuvavanya ekufutshani ufumane ulwazi.Ukuba unokufikelela kwi-intanethi, ungakhangela ulwazi oluthile kwezi webhusayithi zelabhuthori zovavanyo. Ukuba awudingi ukhathalelo lonyango olungxamisekileyo, ungayi kwicandelo lonyango olungxamisekileyo uyokwenza uvavanyo.Ezinye izibhedlele nnoqirha banokukudlulisela kwindawo yovavanyo engaphandle kwedanwo. Inkonzo yeLebhu yezeMpilo yeSizwe kunye nezinye iilabhoratri zabucala zibonelela ngovavanyo kwiindawo zokuhamba. Kuya kufuneka uhlawule iimvavanyo ezenziwa kwiilebhu zabucala.
Ngaba zeziphi iisampuli eziza kuqokelelwa kum kwaye iziphumo zovavanyo zithetha ntoni?
Elona sampuli liqokelelweyo sisuba eliqokelelwa n
geempumlo yakho. Ukuba unokukhohlela okumanzi, unokucelwa ukuba uvelise isampula yamathe esityeni sokuvavanywa. Lesampula izo kuthumelwa kwilabhoratri yezifo. Lelaboratori izovavanya lesampula ikhangele Izinto zofuzo ezivela kwi-coronavirus entsha.
Le ntsholongwane ibizwa ngokuba yi-SARS-CoV-2.
ziphumo zaku zingaphuma zithi unayo okanye awunayo intsholongwana . Iziphumo zovavanyo ezithi unayo, zithetha ukuba izinto zofuzo ezivela kwi-coronavirus (SARS-CoV-2) zifunyenwe kwisampuli yakho kwaye uqinisekisile ukuba unaso isifo se-coronavirus. Jonga isikhokelo se ndingenza ntoni ukuba ndivavanywa ukuba ndinaso isifo se-coronavirus kwaye ndicelwe ukuba ndiye kuvalelo ekhaya.
If your test is Iziphumo ezithi awunayo intsholongwane azichazi ukuba usuleleko lwe-COVID-19 awunakho. Kuya kufuneka ke ngoko uligqibe ixesha lakho lokuhlala wedwa njengoko ubuvelele kusulelo, kwaye kuya kufuneka uvavanywe futhi kuphela ukuba oku kucetyiswa ngumboneleli wakho wezempilo.
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iziphumo zam zaselebhu?
Ixesha lokulindela iziphumo zovavanyo wesampuli ziyahluka kwilebhu nelabhu. Ngokubanzi, kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukufumana iziphumo.
Iziphumo zovavanyo ziya kuthumelwa kubani?
Iziphumo zovavanyo lwakho ziya kuthumelwa kumboneleli wakho wezempilo. Ukuba uvume ukuqhagamshelwa neziphumo zovavanyo, iziphumo zovavanyo lwakho zinokuthunyelwa ngqo kuwe.
Yintoni ekufuneka ndiyenzile ngelixa ndilinde iziphumo zam zovavanyo?
Ngelixa ulinde iziphumo zakho, uyacetyiswa ukuba uzivalele wedwa ekhaya. Jonga isikhokelo se ndingenza ntoni ukuba ndidibane ngokusondela kumntu esiqinisekisiweyo ukuba nesifo kwaye ndicelwe ukuba ndiye kuvalelo ekhaya.